Qurbajoogta Imanaya Dalkooda Oo Laga Dhimay Qiimihii Tigidhka Diyaaradaha. - Cakaara News
Qurbajoogta Imanaya Dalkooda Oo Laga Dhimay Qiimihii Tigidhka Diyaaradaha.
Addis Ababa(CN) Khamiis.July.02.2015, Qurbajoogta imanaya dalka ayaa laga dhimay qiimaha ay ay kusoo raacayaan diyaarada boqolkiiba 10 iyadoo ay jiraan sidoo kalena in laga fudaydiyay gram ka alaabta ay wataan. Dhimaalkaan ayaa kabilaabanaya maalintii shalay July 02- July -16 ilaa 30ka August oo noqoshada ah.
Siduu u sheegay warbaahinta wasiiru dawlaha wasaarada arimaha dibada ee DFI mudane Dawano Kadir waxaa uu fahfaahin kabixiyay qorshayaasha siyaasadeed ee ay dawlada ahmiyada ku siinaysao dadkeeda qurbajoogta ah.
Wasiiru dawlaha ayaa sheegay in atni kor u qaadaysa kaalinta ay qurbajoogtu ku leeyihiin horumarka gaar ahaan maalgashiga, dalxiiska iwm.
Waxaana bisha August ee foda inagusoo haysa si wayn loogu diyaar garoobayaa maalinta qurbajoogta ee heer qaran oo ah markii ugu horaysay ee laqabto kuna aadan 12 ilaa 16 bisha August. Xuska maalita Qurbajoogta ayaa dhawaan uun la ansixiyay in sanad walba la xuso maalinka qurbajoogta.
Waxayna taasi muujinaysaa dadaalka ay xukuumadu siinayso kaalinta qurbajoogta oo kaqayb qaata hawlaha horumarka iyo nabadgaliyada dalka, waxaana xusid mudan in ay qurbajoogta Soomaalida Itoobiya kaalin hormuud kaga jiraan hawlaha kaqab qaadashada horumarka dalka, iyadoo dhawr jeer lagu abaal mariyay xukuumada DDSI dadaalka ay qabatay wakaalada Qurbajoogta DDSI.